ပြည်တွင်း | Page4| Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး ချက်ချင်းထိန်းသိမ်းခံရ
By marlarnyein 3237 days ago on ပြည်တွင်း from www.first-11.com
တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူဖြစ်သည့် Generation Youth အဖွဲ့မှ ကိုကျော်သူက လက်ပံတောင်းရှိ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ သိမ်တော်အား မူလအခြေအနေအတိုင်း မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ လက်ပံတောင်းတောင်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော ပုဒ်မ ၁၄၄ အား ရုပ်သိမ်းပေးရေး၊ ဒေါ်နော်အုန်းလှ အပါအ၀င် မတရားအကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးထားမှုများကို ချက်ချင်းရပ်နှင့် ပြည်သူကို ဖိနှိပ်နေသော စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ကို ဖျက်သိမ်းပေးဟု ရေးသားထားသော စက္ကူပြားကို ကိုင်ဆောင်ကာ မြို့တော်ခန်းမရှေ့၌ ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့သည်။
"ပထမ တစ်ခေါက်ကလည်း ဆန္ဒပြတဲ့အတွက် သူ့ကိုခံဝန်နဲ့ လွှတ်ပေးထားရတာပါ။ ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ စာတင်ပြီး ပြလို့ရရဲ့သားနဲ့ စာမတင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဥ
အနာကြီးရောဂါကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါ ပျက်စီးရသည့် လူနာသစ်များ နှစ်စဉ်တိုးပွားလာသည့် အကြောင်းရင်း
"သုတေသန လုပ်ဖို့အတွက် အဲဒီဒေသက သားဖွားဆရာမတွေ၊ အနာကြီး လူနာဟောင်းတွေ၊ ဆေးစားဆဲ လူနာဟောင်းတွေကို သင်တန်းပေးမယ်။ ပြီးရင် လူနာရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ သူတို့ကို တွဲပြီးလွှတ်မယ်။ အနာကြီးရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပြောပြပြီး ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်မယ်။ လက္ခဏာတွေက ဘယ်လိုစပေါ်တယ်။ တချို့ကျတော့လည်း လက္ခဏာ မပေါ်ဘဲ ကိုက်ခဲပြီး လက်တွေကောက်ကွေးသွားတာတွေ ရှိတယ်။ လူနာကိုယ်တိုင် ပြောပြခြင်းအားဖြင့် ဒီလိုခံစားရတဲ့ လူနာမှာ လူနာရှင်နဲ့ဆိုတော့ လူနာတွေ ပိုပြီးထွက်လာနိုင်မယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ လူနာသစ်ရှာဖွေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်မယ်။ ပြီးရင် သူတို့ကောက်ယူထားတဲ့ လူနာစာရင်းတွေ အချက်အလက
အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း၂၀၀ ကျော်
အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းသည် သီးခြားဥပဒေ အနေဖြင့် ပြဌာန်းရန် မလိုအပ်ဘဲ အကယ်၍ လွှတ်တော်က အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေအဖြစ် မဖြစ်မနေ ပြဌာန်းမည် ဆိုပါကလည်း ဥပဒေကြမ်း ပြုစုချိန်တွင် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် ယင်းဥပဒေသည်လည်း မိမိတို့ သဘောဆန္ဒအလျောက် မှတ်ပုံတင်လိုသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသာ ဖြစ်သင့်ကြောင်း ၎င်းတို့ကဆိုသည်။
ထို့အပြင် ယင်းဥပဒေမူကြမ်းနှင့် ပတ်သက်ကာ လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးမည် ဆိုပါကလည်း အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများက အဆိုပြုထားသော အချက်များကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေး ပေးသင့်သည်ဟူသော အချက်များ ပါဝင်သည့် ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ယခုလလယ်ပိုင်
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ကန့်သတ်ဒေသဖြစ်သည့် မိုးကုတ်အပါအ၀င် ရခိုင်သို့ပါ သွားလာခွင့်ပြုသောကြောင့် ပြည်ပခရီးသွားများ စိတ်ဝင်စားမှု များပြားနေ
By nyomyint 3237 days ago on ပြည်တွင်း from www.first-11.com
"လက်ရှိကန့်သတ် ခရီးစဉ် တော်တော်များများကို သွားလာခွင့် ပြုပေးထားပါတယ်။ ရခိုင်ကိစ္စတုန်းက စစ်တွေ၊ မြောက်ဦးဘက်ကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ အခု အဲဒီဘက်ကို သွားလာခွင့် ရတဲ့အတွက် ကန့်သတ်ခရီးစဉ် မဟုတ်တော့ပြန်ဘူး။ လက်ရှိတော့ မိုးကုတ်ဘက်ကို ခရီးစဉ် တင်ပြီးသွားတာကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ မိုးကုတ်ဘက်ကို နိုင်ငံအစုံကသွားတာ တွေ့ရတယ်။ အနောက်နိုင်ငံရော၊ အရှေ့နိုင်ငံရောပါပဲ" ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းကန့်သတ်ဒေသဖြစ်သော မိုးကုတ်မြို့သို့ ထိုင်း၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျာမနီ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံများမှ ခရီးသွားများမှာ ယခုနှစ်အတွင်း ကန့်သတ်ဒေသများသို့ ကြိုတင်
ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ယာယီပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပေါ်သဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အချို့မြို့နယ်များတွင် ယာယီ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်
သြဂုတ် ၂၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင်ကာ ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ယာယီပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ အချို့မြို့နယ်များတွင် ယာယီ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်မှုအရ သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဓာတ်အားထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လေးရုံသို့ ပို့လွှတ်လျက်ရှိသော ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု ယာယီပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်မှု ရပ်ဆိုင်းထားရကြောင်း သိရသည်။ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု စနစ်တွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အချု
By suwatisoe 3238 days ago on ပြည်တွင်း from www.7daynewsjournal.com
ဂျပန်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ (JLPT)ကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်သံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
စာမေးပွဲကြေးမှာ အဆင့်အလိုက်ခွဲခြားထားပြီး N1 အတွက် ကန် ၁၂ ဒေါ်လာ N2 နှင့် N3 အတွက် ၁၀ ဒေါ်လာနှင့် N4 နှင့် N5 အတွက် ၈ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာကြေးမှ ၁ ဒေါ်လာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်ဟောင်းများအသင်း (MAJA)တွင် သြဂုတ် ၁၂ မှ ၂၂ ရက်၊ မန္တလေးမြို့တွင် HITO စင်တာ၌ သြဂုတ် ၂၇ မှ ၂၉ ရက်ထိ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။
အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တွင် ပညာသင်ယူရန် လူငယ်ငါးဦးအား ထူးဖောင်ဒေးရှင်း ထောက်ပံ့မည်
အမေရိကန်-ဗြိတိန် စသည့်နိုင်ငံများရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် သွားရောက်ပညာသင်ယူရန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တစ်ခုစီမှ လူငယ်ငါးဦးကို ရွေးချယ်၍ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ သတင်းရရှိသည်။ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်အတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးသိပံ္ပ၊ ဥပဒေနှင့် စီရင်ထုံးပညာရပ်တို့ကို သင်ကြားလေ့လာစေမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းသည် ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ရန် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိသော ထူးချွန်ကျောင်းသားများအား ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ကြေး ပေးလျက်ရှိပြီး
By kyawswaraung 3239 days ago on ပြည်တွင်း from www.popularmyanmar.com
စာအုပ်ဈေးကွက် အခြေ အနေကတော့ အခုဟာက မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာမှ စာအုပ် ဆိုင်အရေအတွက်ဟာ ဆိုင် ကြီးတွေဆိုရင်လက်ချိုးပြီး ရေ လို့ရတဲ့အနေအ ထားမှာရှိ တယ်။ အဲဒီတော့စာအုပ်တွေကအမျိုး အမည် အများကြီး ဖြစ်တယ်။ ပြောရရင် စာအုပ်ဈေး ကွက်ဆိုတာမျိုး မရှိတော့ ဘူးဖြစ် နေတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင် စာအုပ်ထုတ်ဝေ သူတွေက တစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်။ စာအုပ်ထွက်ရှိနေတာက လည်း အဲဒီလောက်ထိ ထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေက ဆိုင် ၂ဝ ပြည့်အောင်တောင် မရှိ ဘူး။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပို ပြီး ဆိုင်တွေပြုတ်သွားပါတယ်။ စာအုပ်တွေက တစ်လကိုအနည်းဆုံး အုပ်၎ဝဝ လောက်ထွက်နေတာပါ။ အဓိက ကဆိုင်နေရာကြောင့်ပါပဲ။
By mohmohkhin 3239 days ago on ပြည်တွင်း from www.shwemyotaw.com
အဆိုပါ ရွှေကြောကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်းသိုမြို့မှစတင်ကာ မိုးထိ၊ မိုးမိ၊ယင်းမှ တစ်ဆင့် ကယားပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စသည်ဖြင့် ဆက်တိုက် တစ်ကြောတည်း ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနိုင်ငံ ရေအောက်ပင်လယ်ပြင် အထိ ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်ဟု ဂြိုဟ်တုစနစ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားမှု အရ တွေ့ရကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အများပြည်သူကြား သတင်းပျောက်သွားသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''မီဒီယာတွေကတောင် ရေးသား ဖော်ပြလာကြတဲ့အထိ နာမည်ထွက်ခဲ့တာ။ ဒီရွှေကြောကြီးက တူးရခက်မယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်သလို မြန်မာအစိုးရဘက်က ပုဂ္ဂလိကကို ၀င်ခွင့်မပေးဘဲ ဒီရွှေကြောအတွက် ကြိုးစားနေဆဲလို့ သိရတယ်'' ဟု နာမည်ကြီး သတ္တုတူးဖေ
လုယက်မှု များလာသဖြင့် ပုဂံ၊ ညောင်ဦးတွင် အမျိုးသမီး Tourism Police ၃၀ ကျော် ထပ်တိုးချ
By htainlin 3242 days ago on ပြည်တွင်း from news.yatanarpon.com.mm
မြန်မာ့ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေတစ်ခု ဖြစ်သော ပုဂံ၊ ညောင်ဦး ဒေသတွင် လုယက်မှု များလာသဖြင့် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ယခု သြဂုတ် လဆန်းပိုင်းခန့်အထိ အမျိုးသမီး Tourism Police ၃၂ ဦးကို ထပ်တိုး တာဝန် ချထားပေးကြောင်း ပုဂံဧည့်လမ်းညွှန်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းချိုက ပြောကြားသည်။ယင်းဒေသတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက စတင်ကာ Tourism Police ၃၀ ဦးခန့် ထားရှိခဲ့ရာမှ ပုဂံဧရိယာသည် ကျယ်လွန်းသည့် အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်များ၏ ပစ္စည်း လုယက်မှုများ ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် Tourism Police အင်အားများကို ယခုကဲ့သို့ တိုးချဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထပ်တိုး အရေအတွက်နှင့် ဆိုပါက လက်ရှိ
အကယ်ဒမီ အကဲဖြတ်မှု ဒုတိယအဆင့် သြဂုတ်လကုန် စတင်မည်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲတွင် ရုံတင်ပြသပြီးသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၁၇ ကားကို သြဂုတ် လကုန်တွင် ဒုတိယအဆင့် အကဲဖြတ်ကြည့်ရှုမှု စတင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အကယ်ဒမီ အကဲဖြတ် စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒါရိုက်တာ ဦးကြည်စိုးထွန်းက ပြောကြားသည်။
"ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို အကဲဖြတ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇာတ်ကားတွေကို ပထမအဆင့် အကဲဖြတ် ကြည့်ရှုမှုကို အကဲဖြတ် အဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးကနေ ဇူလိုင်လတုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပထမအဆင့် အကဲဖြတ် အဖွဲ့မှာက အနုပညာရှင် ၁၆ ယောက်နဲ့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက တစ်ယောက်ပဲပါတယ်။ သူက လုံးဝဝင်ပြီး မဲမပေးဘူး။ ကျန်တဲ့ ၁၆ ယောက်ကပဲ မဲပေးတယ်။ အကဲဖြတ် အဖွဲ့ဝင်တိုင်းကို လွ
By htainlin 3242 days ago on ပြည်တွင်း from www.7daynewsjournal.com
ဖြစ်ပွားခဲ့သော လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကား လာမည့်စက်တင်ဘာတွင် ပြန်လည်စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက်ရှိပြီး လေးလကျော်အကြာတွင် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်အသစ်ကို ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီက ဆိုသည်။
မြို့အတွင်းကားအစီးရေ သိသိသာသာများပြားလာသော်လည်း ထိုကားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို တိုင်းတာနိုင်သော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြည်တွင်းတွင်မရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ကားတွေများလာတာမှန်ပေမယ့် ကားတွေကနေထွက်တဲ့ အငွေ့တွေကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ မရှိသေးတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေနိုင်လဲဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး” ဟု လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမြင့်
လေယာဉ်ပေါ်တွင် မူးပြီးရမ်းသဖြင့် မြန်မာတစ်ဦး အမှုဖွင့်ခံရ
By sandarmoe 3242 days ago on ပြည်တွင်း from www.mizzimaburmese.com
ယင်းဖြစ်ရပ်သည် ယင်းနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက MAI ၏ စင်ကာပူ - မြန်မာပျံသန်းသော လေကြောင်းခရီးစဉ် အမှတ် 8M – 232 တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။မူးယစ်ရမ်းကားသူအဖြစ် စွပ်စွဲကာအမှု ဖွင့်ခံထားရသူမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ အသက် ၃၀ အရွယ် ကိုကျော်ဝင်းစိန်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ရဲများက အတည်ပြု ထားသည်။
၎င်းသည် အရက်သေစာသောက်စားပြီး လေယာဉ်အမှုထမ်းများဖြစ်သည့် ကိုတေဇာတင်ထွဋ်နှင့် မမြင့်မြင့်ဇင်တို့ထံ ၀ိုင်အရက်တောင်းသောက်ရာ ၀န်ထမ်းများက၎င်းကို အရက်မူးနေသဖြင့် မပေးနိုင်တော့ကြောင်းပြောသဖြင့် ရန်ပြုခဲ့သည်ဟုလည်း ရဲများက မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
စီးပွားကူးသန်းဝန်ထမ်း၏ ၁၂၅ သိန်းတန် ရတနာများအခိုးခံရ
စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး၏ ကျပ် ၁၂၅ သိန်းတန်ဖိုးရှိ ရတနာပစ္စည်းများ ခိုးယူခံရမှုတစ်ခု ကမာရွတ်ရဲစခန်းတွင် သြဂုတ် ၁၄ ရက်က အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက မှုခင်းသတင်း ထုတ်ပြန်သည်။ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးသွားသည်မှာ စီးပွားကူးသန်းဌာနတွင် စာရေးရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမနေထိုင်ရာ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ၃ ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်မှပစ္စည်းများ ကို ခိုးယူခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
သူမသည် သြဂုတ် ၁၄ ရက် ညနေ၅ နာရီအချိန်တွင် အိမ်ပြန်ရောက်ရာ အိပ်ခန်းအတွင်းရှိ ဗီရိုအံဆွဲများ ပွင့်နေသည် ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းအကူအညီဖြင့် ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရခိုင်တွင် စာသင်ကျောင်း ၂၀ ဆောက်မည်
အဆိုပါ ကျောင်း ၂၀ ကျောင်းကို ဂွ၊ သံတွဲ၊ စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူမြို့များတွင် ယခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတွင် အပြီးဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
ဦးကျော်သန်းက “ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့မြို့နယ်တွေကို ဦးစားပေးဆောက်လုပ်သွားမှာပါ။ကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါပြီ။ ဂွ၊ သံတွဲ ၊ စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ မြို့နယ်တွေမှာ ဆောက်လုပ်သွား မှာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာက စာသင်ကျောင်း လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ်ကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံဧ။် အဓိကပင်မ၀င်ပေါက်
By sandarmoe 3242 days ago on ပြည်တွင်း from www.first-11.com
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ်ကြီး တည်ဆောက် ပြီးစီးပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပင်မ၀င်ပေါက် လေဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ၀င်ထွက်နေသည့် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများကို ဟံသာဝတီ လေဆိပ်သစ်ကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ်ကြီးတွင် ခရီးသည်တင် လေယာဉ် အမျိုးအစားများတွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည့် Airbus A 380 လေယာဉ်အထိ ဆင်းသက်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ လေယာဉ်ဆိုက်ကပ် တံတား ၁၂ ခု၊ ခရီးသည်တင် လေယာဉ် ၃၇ စင်း၊ ကုန်တင်လေယာဉ် ရှစ်စင်းနှင့် ပြုပြင်ရေး လေယာဉ် ၁၅ စင်း စုစုပေါင်း လေယာဉ်စင်းရေ ၆၀ ရပ်နားနိုင်မည်...
ဘာသာပေါင်းစုံ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး အတွက် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေ အမေရိကန်မှာလေ့လာ
By cherrythet 3243 days ago on ပြည်တွင်း from www.rfa.org
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖိတ်ကြားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်များ လေ့လာရေးအစီအစဉ်နဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ ကို ရောက်လာချိန်မှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကဏ္ဍကိုလေ့လာဖို့ လာရောက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မွတ်စလင်၊ ခရစ်ယာန်စတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွှတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူ ဂ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။
သိမ်းဆည်းခံလယ်မြေ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် တရားစွဲခံထားရခြင်းများ
By cherrythet 3243 days ago on ပြည်တွင်း from news-eleven.com
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခုမှ တောင်သူလယ်သမားများ၏ သိမ်းဆည်းခံထားရသည့် လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် တောင်သူများ တရားစွဲခံထားရသည်များကို ရုပ်သိမ်းပေးရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ တောင်ငူမြို့မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့အထိ လမ်းလျှောက်မည့်အဖွဲ့ သြဂုတ် ၁၄ ရက်နံနက် ၈ နာခွဲတွင် တောင်ငူမြို့ မုခ်ဦးရှိ မင်းကြီးညို ရုပ်တုရှေ့မှ စတင်ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရှိရသည်။အဆိုပါ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအလံ စိုက်ထူရန် ရန်ကုန်မှ လိုင်ဇာအထိ လမ်းလျှောက်သည့် အဖွဲ့နှင့် အုတ်တွင်းမြို့နယ်မှ စတင်ကာ ရက်ပေါင်း ၅၇ ရက်အထိ ပါဝင်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည့် အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ၀ဲဒေါင့်ကျေးရွာ ဘုရားကျောင်းမှ အသက် ၆၁ နှစ်ရှိ သံဃာတစ်ပါး အပါအ
ဟောင်ကောင်အပျော်စီးသင်္ဘော MS.Super Star Libra သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိ
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Star Cruises (HK) Limited မှ MS. Super Star Libra အပျော်စီးသင်္ဘော လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်အား ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု၊ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် Myanmar Voyages International Tourism Co.ltd က စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တင် အပျော်စီးသင်္ဘော MS. Super Star Libra တွင် ခရီးသည် ၉၆၀၊ သင်္ဘောဝန်ထမ်း ၉၁၄ ဦး လိုက်ပါလာပြီး ခရီးသည် အများစုမှာ မလေးရှား (တရုတ်) လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ အပျော်စီး သင်္ဘောသည် ယင်းနေ့ညနေ ၆ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခရီးသည် ၁၅ ဦးအား တင်ဆောင်လျက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးခက်
« previous12345678910...32 next »
ဤနေရာတွင် Link ကို submit လုပ်ပါ
Please Login To Submit A New Link
You must login to submitanew story. Don't have an account yet? Join now, it's free!